Delestazy sy Jirama | Hevitra MPANOHARIANA |
Delestazy sy Jirama
2016-12-15 @ 21:36 in Andavanandro
Raha tsy tena maty tanteraka ny delestazy nandritra ny frankofonia fa nisy naningatsingana ihany tany ambadimbadika tany, tsy Antananarivo renivohitra irery akory i Madagasikara ka hoe rehefa tsy nisy teto dia tsy nisy nanerana an'i Madagasikara. Nisy dia nisy hatrany ny delestazy tany amin'ireo tanàna atao hoe madinika mba manana ny lazany ihany, atao hoe lehibe toa kely loatra raha oharina amin'Antananarivo.
Niverina amin'ny heriny tanteraka indray io delestazy io ankehitriny, eto Antananarivo. Fantatra mazava fa misy izy any amin'ireo tanandehibe hafa, ary mbola mafy noho ny eto aza, saingy izay angamba ilay hoe izay akaiky vilany feno arina, ny akaiky ihany no fantatra fa ny kely tsy mba mamindro, tsy mahazo hafanana amin'ny alina sy ny hazavana tarafiny. Mahatsiaro ho kely ve ilay Malagasy ka tsy re taraina intsony afa-tsy ny eto Antananarivo? Tsy izay loatra intsony angamba fa efa mahay mionona amin'izay omena azy angamba ity: "fataliste" hoy ny tenin'ny mpanjanaka. Tsy maka lagy, izay ataon'ialahy eo!
Fa ny hany olana amiko dia diso fiantefa ny tsikera ataon'ny olona, tsy ny JIRAMA ry zareo no olana fa izay manome ny baiko hampisy io olana io an! Tsy hoe JIRAMA no miandraikitra mivantana ny fanomezana ny jiro sy ny rano eto Madagasikara dia izy irery no tompon'andraikitra amin'ny fahavoazantsika. Manana andraikitra daholo ny rehetra, izaho sy ianao mamaky io, raha eto Madagasikara ianao, ary ny fitondram-panjakana no lohany amin'izany. Maninona no vitsy ny miteny hoe ritra ny ranon'i Mantasoa? Maninona no vitsy ny miteny hoe latsaka ambany dia ambany ny haavon-dranon'Andekaleka ka tsy afaka manome herin-jiro feno intsony? Iza no tompon'ny fahadisoana raha tsy mety milatsaka ny orana amin'ny faritra sasany? Iza no mpandoro tanety? Fakafaka tsara iverenana henoina ny fandaharana rivotra androany 15 desambra tao amin'ny RDJ hahazoanao bebe kokoa ny tian-kolazaina.
Rehefa miditra politika sy fitadiavam-bola dia lesona azoko hatramin'ny taona 2009 ny hoe tsy ny hamahana ny olana no tanjona fa ny hahazoanao tombontsoa amin'izay tolokevitra naroso, ary vao maika aza manampy trotraka sy miteraka olana saro-bahana bebe kokoa izany tolo-kevitra izany ahafahanao mitsentsitra bebe kokoa izay azo tsentsefina ary ny orinasam-panjakana no lasibatra voalohany amin'izany. Ataoko tsipalotra fotsiny ny fanontaniana hoe fa maninona no tsy afa-mampiditra foto-drafitrasa manokana ny JIRAMA hamahany ny olana fa olon-kafa hatrany no tadiavina sy atao laharam-pahamehana amin'ny fampanofana milina mpameloha herin'aritra, olon-kafa tsy mahalala hafa tsy ny tombontsoany manokana, ary ny mpanome alalana amin'ny fampanofana zavatra lafovidy tsy ho takatra kosa kosa mihevitra fa mahazo ampaham-bola ho azy manokana ihany koa fa tsy misy fitsinjovana velively ny orinasa sy ny mpiara-belona?
Ka raha amin'izao fotoana izao no hitetateta hoe omeo ny tsy miankina io orinasa io hotantaniny dia efa miharihary sahady hoe iza ireo vondron'olona hahazo izany fitantanana izany, fa izaho tsy hilaza aminareo, satria ireo manao izay hahakenda an'i JIRAMA ihany ireo mitilitily miandry mahazo sy te-hanao rapa-dango sy ampihimamba io tokony ho filàna fototry ny Malagasy iray manontolo io. Tahaka ny taribin'ny PTT taloha ihany e! tsy tokony ho orinasa tsy miankina tokana no hahazo ilay fotodrafitrasam-panjakana teo aloha fa tokony hisitraka izany avokoa ireo miasa ho amin'ny fifandraisan-davitra, saingy efa nisy moa ny hafetsifetsena dia na ny tany sy zavatra hafa tsy tokony ho azy aza lazaina fa tao anatin'ny fifanarahana ho tafiditra tamin'ny nividianana azy avokoa.
Lava sahady izay voasoratra nefa zavatra hafa, natao nandritra ny fotoana nahafaty ny jiro, no tena saiky notantaraina fa ataoko amin'ny lahatsoratra hafa eo ihany angamba izany.
Jentilisa, Alakamisy 15 desambra 2016